Bayaan ka soo baxay golaha dhexe ee barbaarta sitti – Xeernews24
Bayaan ka soo baxay golaha dhexe ee barbaarta sitti
Bayaan ka soo baxay golaha dhexe ee barbaarta sitti.
Halganka barbaarta oo socda muddo 3 bilood ah kaas oo kakacay dulmiga cadaalad darrada iyo horumar la’aanta ayaa gobolka sitti iyo magaalada diri dhaba ka dhogay bannaan baxyo nabadaysan iyaga oo aan gaadhi gubay waddana xidhayn balse aragtidooda uun sida dastuurku u siiyay u cabbiraya.
Haddaba baryahan dambe waxaa isasoo tarayay caga juglaynta iyo cadaadiska barbaarta kaga imanayay taliska kaligii taliska ah ee cabdi maxamuud cumar ilaa heer cid kasta oo barabaarta qaraabo la ah oo deegaanka ka shaqaysa qaarna shaqadii laga eryay qaarna loo hanjabay laguna qasbay in ay halgankooga ka laammaan
6/6/2018 waxaa xubno barbaarta ka mid ah isugu yeedhay maamulka magaalada dir dhaba shirna la qaatay duqa magaalada ibraahim cusmaan Madaxa xafiiska duqa magaalada xasan daahir Iyo xubno ka socda qabalaha 09 iyo xafiiska xisbiga.
Shirkaas oo kaga wada sheekayteen xaaladda taagan iyaga ugu dambayntii ku heshiiyay in horumarka magaalada kawada shaqeeyaan dhallinyaraduna ay doorkooga ka ciyaaraan horumarka iyo ka qayb qaadashada maamulka suubban dhallinyaradana ay dammaanad u qaadan in ay magaalada nabad ku heli doonaan.
Haddaba waxaa muuqata in ismaamulka magaalada diri dhaba uu heshiiskii lagalay ka baxeen iyaga oo saaka bilaabay in ay xubno barbaarta ka mid ay ay guryahooga ka.soo xidhaan qaar kalana ay ku daba joogaan.
Haddaba hadii muddo 24 saacadood ah dhallinyarada lagu soo dayn waayo in ay ku kici doonaan talaabooyinkan hoos ku qoran.
1-in boqolaal barbaarta ka tirsan ay magangalyo siyaasadeed waydiisan doonaan deegaannada amxaarta iyo oromiya iyo maamulka magaala madaxda addis ababa xidhiidh ay horay barbaartu u la samaysayna way ka aqbaleen.
2-in Barbaarta iyo Qeerada oo isku duuban ay kacdoon kooggan ka samayn doonaan magaalada .
3- Markii hore barbaartu waxay go aan ku gaadheen in gagada ciidda aysan wax kacdoon ah ka samayn iyaga oo ixtoraamaya mashaacirta muslimiinta
Balse hadda ay Barbaarta iyo qeeraduba rabshado ka dhex dhalin.doonaan.
4-in ay beegsan doonaan cid kasta oo dawladda u shaqaysa oo ay san hadda wixii ka dambaysa ay nabad magaalada ku dhex socon doonin
5- In ay gubi doonaan xarumaha amniga iyo guryaha dhuuni qaatayaasha
6-in ay magan galyo siyaasadeed waydiisan doonaan safaaradaha dalka jooga iyo qaramada midoobay iyo midawga afrika cabashadoodana ay u gudbin doonaan.
1- Abdi badcase
https://www.xeernews24.com/wp-content/uploads/2018/04/Kacdoonka-Barbaarta-Sitti.jpg 336 546 admin https://www.xeernews24.com/wp-content/uploads/2017/06/xeernews-1.png admin2018-06-13 10:37:292018-06-13 10:37:29Bayaan ka soo baxay golaha dhexe ee barbaarta sitti
DAAWO: Ilaalada Ruclaysa ee ugu yaabka badan Dunida. ANIGA QABIILKU MACNO IIGUMA FADHIYO, EE HA RUMAYSANINA KUWA YIDHAAHDA…”...